तपाईंको दिमाग हाम्रो हो Martech Zone
तपाईको दिमाग हाम्रो हो
विगत केहि हप्ताहरु को लागी म पुस्तकहरु लाई उठाउन र राख्दै छु - ती मध्ये एक बिग स्विच, द्वारा थियो निकोलस कार। आज मैले पुस्तक पढ्ने काम सकें।
निकोलस कारले यस देशको विद्युतीय पावर ग्रिडको विकास र क्लाउड कम्प्युटि ofको जन्म बीच समानताहरू निर्माण गर्न उत्कृष्ट काम गरे। उस्तै नोटमा, वायर्डको एक उत्कृष्ट लेख छ, जुन प्लानेट अमेजन हो, जुन मे २०० publication को प्रकाशनमा अमेजनको क्लाउडको कथा भन्छ। निश्चित रूपमा जाँच गर्नुहोस्। वायर्डले अमेजनको प्रस्तावलाई हार्डवेयरको रूपमा सेवा (हाउस) को रूपमा दर्शायो। यसलाई सेवा (IaaS) को रूपमा इन्फ्रास्ट्रक्चरको रूपमा पनि चिनिन्छ।
क्लाउड कम्प्युटि into र निकट भविष्यमा हामी कसरी विकास गर्ने भन्ने निकोलसको अन्तरदृष्टि सराहना गर्दा, जब उनले अपरिहार्य कुरा गर्न थाल्दा म चकित भएँ नियन्त्रण कम्प्युटरहरू हामी माथि हुने थियो हामीले तिनीहरूलाई एकीकृत गर्न जारी राख्यौं - जैविक रूपमा पनि। पुस्तकले कामलाई अपवाद लिन्छ जुन बजारहरूले हाल डाटाको उपयोगमा गरिरहेका छन् - र लगभग भयावह दृश्य लिन्छ जहाँ यो भविष्यमा हुन सक्छ।
प्रत्येक चोटि जब हामी पाठको पृष्ठ पढ्छौं वा लिंकमा क्लिक गर्दछौं वा भिडियो हेर्दछौं, हरेक पटक हामीले शपिंग कार्टमा केहि राख्दछौं वा खोज प्रदर्शन गर्छौं, प्रत्येक पटक जब हामी एक ईमेल पठाउँदछौं वा इन्स्टन्ट-सन्देश विन्डोमा कुराकानी गर्छौं, तब हामी भर्छौं एक "रेकर्ड को लागी फारम" मा। ... हामी प्राय जसो धागोहरू हामी स्पिन गर्दैछौं र कसरी र कस द्वारा उनीहरू द्वारा हेरफेर गरिरहेछन् भन्ने बारे हामीलाई थाहा हुँदैन। र यदि हामी अनुगमित वा नियन्त्रण भएकोमा सचेत थियौं भने पनि हामी ध्यान दिँदैनौं। आखिर, हामी पनि व्यक्तित्वबाट फाइदा लिन्छौं जुन इन्टरनेटले सम्भव बनायो — यसले हामीलाई अझ उत्तम उपभोक्ता र कामदार बनाउँदछ। हामी अधिक सुविधाको लागि बदलामा ठूलो नियन्त्रण स्वीकार्छौं। माकुरोको वेब नाप्नको लागि बनाईएको हो, र हामी यसको भित्र दुखी छैनौं।
हेरफेर र नियन्त्रण धेरै कडा शब्दहरू छन् जुन म सहमत हुन सक्दैन। यदि म ग्राहकहरूको डेटा प्रयोग गर्न सक्दछु प्रयास गर्न र भविष्यवाणी गर्न को लागी उनीहरूले के गर्न सक्छन्, म तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्दै छैन वा खरीदमा उनीहरूलाई हेरफेर गर्दैछु। बरु, डाटा प्रदान गर्न बदलामा, म केवल तिनीहरूलाई खोजिरहेको हुन सक्छ प्रदान गर्न कोशिस गर्दैछु। त्यो सबै पक्षहरु को लागी कुशल छ।
नियन्त्रणले संकेत गर्दछ कि ईन्टरफेसले मेरो स्वतन्त्र इच्छालाई केहि हदसम्म पार गरेको छ, जुन एक हास्यास्पद बयान हो। हामी ईन्टरनेटमा सबै दिमाग लगाउने जोम्बिसहरू हौं जोसँग राम्रोसँग राखिएको पाठ विज्ञापनको बिरूद्ध आफूलाई बचाउने क्षमता छैन? साँच्चै? यसैले उत्तम विज्ञापनहरूले अझै मात्र एकल अंक क्लिक-थोरै दरहरू प्राप्त गर्दछ।
मानिस र मेशिन एकीकरण को भविष्य को लागि, म ती अवसरहरु को बारे मा पनि आशावादी छु। कीबोर्ड र इन्टरनेट जडानको आवश्यकता बिना नै खोज इन्जिन पहुँच गर्न सक्षम भएको कल्पना गर्नुहोस्। मधुमेह रोगीहरु दुबै आफ्नो रगतमा चिनी को स्तर निगरानी गर्न र पोषण प्रदान गर्न खान को लागी सबै भन्दा राम्रो खाद्य पदार्थ पहिचान गर्न सक्षम हुनेछ। खानामा? हुनसक्छ तपाईं आफ्नो दैनिक क्यालोरिक सेवन निगरानी गर्न सक्नुहुन्छ वा वजन हेर्ने पोइन्टहरू खानुहुन्छ।
तथ्य यो हो कि हामी आफैंमा थोरै नियन्त्रण गर्छौं, चिन्तामा नपरौं AI। हामीसँग स्वास्थ्य का बोकाहरू छन् जसले उनीहरूको शरीरलाई भोकमरी दिन्छ, व्यायाम नट जो उनीहरूको जोडी लगाउँदछ, दुर्व्यसनी कि झूट बोल्छ, धोखा दिन्छ र चोरी गर्न को लागी ठीक छ… आदि। हामी आफैं अपूर्ण मशीनहरू हौं, सधैं सुधार गर्न कोशिस गर्दैछौं तर अक्सर छोटो हुन्छौं।
किबोर्ड र मोनिटर प्रयोग गरेर स्किप गर्ने क्षमता र इन्टरनेटमा 'प्लग-इन' गर्न मलाई कुनै डर लाग्दैन। म त्यो चिन्न सक्षम छु नियन्त्रण यो एक शब्द हो जुन शिथिल र मानवको साथ प्रयोग हुन्छ, कहिले पनि वास्तविकता हुँदैन। हामी आफैंलाई कहिल्यै नियन्त्रण गर्न सकेनौं - र मानव निर्मित मेसिनहरूले परमेश्वर आफैंले भेला गरेको उत्तम मेसिनलाई कहिले पनि जित्न सक्नेछैनौं।
ठूलो स्विच एक महान पढिएको छ र म कसैलाई पनि यो उठाउन प्रोत्साहित गर्दछु। मलाई लाग्छ कि यसले भविष्यका कृत्रिम बुद्धिमत्तामा उठ्ने प्रश्नहरू राम्रो छन्, तर निकोलस अवसरको अलार्मस्ट दृष्टिकोण लिन्छन् बरु यसले मानव अन्तरक्रिया, उत्पादकत्व र जीवनको गुणस्तरको लागि के गर्नेछ भन्ने आशावादी दृष्टिकोणको सट्टामा।
टैग: पात्रोविचारहरूको विरोध गर्नुहोस्सामग्री निर्माणकार्यक्रम व्यवस्थापनकार्यक्रम प्लेटफर्मगुगल क्यालेन्डरiCalपाइरेट बे
भेरिजन: कृपया पागलपन रोक्नुहोस्
अप्रिल 20, 2008 मा 8: 59 PM
म निकको पुस्तक मार्फत पनि आफ्नो बाटो बनाउँदै छु .. अहिलेसम्म यो धेरै चाखलाग्दो पढाइ रहेको छ - आशा छ यो त्यस्तै रहनेछ
अप्रिल 20, 2008 मा 9: 17 PM
निकोलस टेक्नोलोजी संसारमा एक ठग एजेन्ट को एक बिट जस्तो देखिन्छ, तर म साँच्चै आफ्नो दुबै ब्लग पढ्न रमाईलो लाग्छ र मलाई यो पुस्तक साँच्चै मन पर्थ्यो। हालसालै, म अरूको भन्दा इतिहासको किताबहरूमा बढी आकर्षित भएको छु - र निकोलसले ऊर्जा उत्पादनको विकास र कम्प्युटि toको समानतामा केही ठूलो अन्तरदृष्टि प्रदान गरे।
त्यो किताबको मेरो मनपर्ने अंश थियो र मलाई लाग्छ कि समानताहरू सहि थिए। यद्यपि जब उहाँ त्यसभन्दा अघि जानुहुन्छ, चीजहरू थोरै नकारात्मक भए होइन कि ती जानकारी हामीले चिन्ताको विषय होईन - केवल मलाई लाग्छ कि यसले आश्चर्यजनक अवसरहरूलाई वेवास्ता गर्‍यो।
रमाईलो गर्नुहोस् - यसलाई पढेर पनि हेर्नुहोस्।
अप्रिल 21, 2008 मा 8: 04 एएम
अन्तरदृष्टि को लागी धन्यवाद। मँ सहमत छु कि डराउने रणनीतिहरूले पुस्तकहरू बेच्न सक्छ
नौसिखिए पाठकहरूलाई, तर वास्तविकता भनेको कम्प्युटरले सशस्त्र छ
डाटा..होईन र "विश्व नियन्त्रण" गर्दैन .. CrAzy !!!
राम्रो काम गरीरह्नु!
बर्षे बजार को लागी मार्केटिंग र मेरो पीसी को लागी डर छैन!